Sidee ayaad ugu guulaysatay inaad dib u dhisto boggaga internetka habka dabiiciga ah?
Dabcan, way ka baxday su'aasha ah in dib u dhiska dib-u-dhiska boggaaga internetka uu ka mid yahay qodobbada muhiimka ah ee lagu guuleysto Mashruuca Mashruuca Optimization. Waxa kale oo la fahamsan yahay in ay jiraan habab badan oo kala duwan oo lagu fulinayo istaraatiijiyad dhisme oo habboon. Laakiin maxay micnaheedu tahay dib u dhiska dib-u-eegista ee boggaaga internetka habka dabiiciga ah? Hagaag, taasi waxay ku xiran tahay. Sida aniga oo kale, waxaan rumeysanahay in isku-daygii dhowaan la sameeyay si aan u qaabeyno xiriirka dabiiciga ah ee dabiiciga ah uu u muuqday mid guulaystay. Sidaa daraadeed, aan ka dhigno caddaynta - dib u dhiska dib-u-dhiska wuxuu dabiici ahaan u taagan yahay "cayaar caddaalad ah," oo aan qishmaneyn oo ku xad gudbay tilmaamaha webmaster ee ugu muhiimsan Google. Anigu waxaan fiirin doonaa qaababka ugu daran ee khatarta ah ee "dabiiciga ah" ee dhismaha isku xirka (waa inaad ka fogaataa qiimaha oo dhan!). Waxaan rajeynayaa inaad si macquul ah u arki doonto markaad dib u dhiseyso boggaaga - sida habka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah.
Ka fogow Bixinta Dib u Eegista Boggagaaga Shabakadda:
Iskuxidhka iyo Isku-dhejinta
inta badan farsamooyinka dhismaha ee isku dhafka ah, weli waa in weli laga fogaado - marka hore iyo ugu horreyn. Waxaa jira dhowr nooc oo shabakadaha websaydhka ah iyo bixinta barnaamijka internetka ee kala duwan si loo sameeyo heshiis la xariiro. Dabcan, is-weydaarsiga lala yeesho qaar ka mid ah gadaashooda waxaad kula yeelan kartaa fikrad aad u fiican. Si kastaba ha noqotee, wax ka qabashada isku xirnaanta baraha ee is-weydaarsiga isku xirka, iyo sidoo kale isku-xidhka isku xirka (a. k. a. Hawlaha Dahabiga ee Dhismaha Xiriir) Inta badan waxay keenaysaa culus xad-dhaaf ah oo leh waxyaabo badan oo tayo hoose leh, oo ku dhow. Taas macnaheedu waa in codsiga is-weydaarsiga isku-xirka ama giraantu ay dhab ahaantii wakhti iyo lacagba ku waayi karaan.
Maxay tahay waxa badanaa - si joogta ah u samaynta waxay tahay sida ugu fiican ee loo helo feejignaan culus oo ka imanaya makiinadaha waaweyn ee raadinta sida Google laftiisa. Taasna micnaheedu ma aha laakiin rigoore aad u sarreeya ayaa ku soo badanaya website-kaaga ama blogka. Taasina waa sababta is-weydaarsiga xiriirka aysan hubin habka dabiiciga ah ee dib-u-dhisida bogaggaaga, sax?
Ilaha aan khadka laheyn
Bogagga internetka ama blogyada aan ku habboonayn waa wax kale oo aan marnaba loo isticmaalin si loo dhiso dib u qaabeyn habka dabiiciga ah. Xaqiiqdii, haddii aad ku dhaafto xayawaan aad u badan oo leh dhinac saddexaad oo aan waxba ku lahayn mawduucaaga muhiimka ah ama qaybta warshadaha, xidhiidhadaas ayaa ku siin doona ugu yaraan aad u yar (haddaan eber lahayn). Ama, kiiskii ugu xumaa, waxaa sidoo kale laga yaabaa in lagu ciqaabi doono Google marka la tixgeliyo dhaqdhaqaaqyada sida runtii aadka u adag iyo kuwa wax ku oolka ah.
Meelaha iyo meelaha kale ee shakiga laga galo
Siyaasadda rasmiga ah ee baaxadda raadinta aduunka ayaa ku dhawaaqaysa farriin cad - iibsashada ama iibinta dhabarka si toos ah waxay noqon kartaa mid aan la aqbali karin xaalad kasta. Taasi waa wax ku saabsan xiriirada mushaharka - waa in ay dhacdaa in Google uu ogaado nidaam ganacsi oo leh dhisme qormooyin xiriirinaya, waxa uu doonayaa in uu soo jiito dhamaan dhinacyada heshiiska. Inkasta oo backlinks backlinks ay inta badan u muuqdaan kuwo tayo leh oo tayo leh oo dabiici ah oo tayo leh, khatarta aad ayay u weyn tahay.
Goobaha kale ee laga shakiyo oo aan marnaba samayn doonin in dib loo dhajiyo boggaga internetka qaabka dabiiciga ah, waxaan ku talineynaa in ay hagaajiyaan hanaanka hoose ee tayada maqaalka. Haa, wax ku saabsan laba sano ka hor waxay u isticmaaleen inay faa'iido badan u yeeshaan abuurista xiriirada raqiis ee sahlan - waa inaan qirayaa xaqiiqadan. Laakiin hadda mashaariicdaasi ma shaqeeyaan, dabcan, haddii aad dhab ahaantii dooneyso in aad naftaada ku kasbato jumlad rikoor ah oo degdeg ah Source .